Roberto Mancini oo ka shaqo bilaabi doona London, tollow waa Kooxdee Chelsea, Arsenal mise,,, - Jazeera FM
Roberto Mancini oo ka shaqo bilaabi doona London, tollow waa Kooxdee Chelsea, Arsenal mise,,,
October 22, 2017 admin featured
Tababaraha Kooxda Zenit Roberto Mancini ayaa bartilmaameed u ah kooxda West Ham United, haddii ay ceyriyaan Slaven Bilic, sida ay qortay Jariirada Mirror Sunday.
Bilic ayaa ku guuldaraystay in uu horumar ka sameeyo qaar ka mid ah kulamada Premier League ee xagaagan, kaddib markii uu suuqa kasmeeyay saxiixyo kala duwan, hase ahaatee la kulmay guuldaroonin isdaba joog ah.
Slaven Bilic ayaa la siiyay fursad uu Kooxda West Ham kusii maamuli karo hadii uu badiyo labada kulan ee soo socota oo ay la kala ciyaari doonaan Naadiyada Tottenham iyo Crystal Palace si uu u sii ahaado macalinka Kooxda.
Si kastaba ha ahaatee’ War sidaha The Mirror ayaa fahansan in ku guulaystihii horyaalka Premier League ee Kooxdii Manchester City Roberto uusan ku qanacsaneen joogitaanka Kooxda Ruushka, xilli ay rabto in ay dib ugu soo celiso England.
The post Roberto Mancini oo ka shaqo bilaabi doona London, tollow waa Kooxdee Chelsea, Arsenal mise,,, appeared first on Goolasha.net.
← Halkan si ku meel-gaar ah ayaan uga guurnay!
Safafka Kooxaha Milan iyo Genoa’ Montella oo ay u bilaabatay Tijaabo laba kulan ah →